Sei Gorofu Dzichiine Masero 18?
Iyo yakareba urefu hwegorofu ine masango 18. Nei zvakadaro? Ko mabako 18 akasvika sei pakuzivikanwa semuenzaniso wekambani, uye yekutenderera gorofu ? Kungofanana nezvimwe zviitiko zvakawanda zvegorofu, 18-mashizha-se-maitiro anoenderana neThe Old Course muSt. Andrews .
Maitiro Akare Akafanira Kuve Nemakomba 18
Kuenzanisa kwemasango 18 sezvo urefu hwe "mutemo" gorofu hauna kuitika semugumisiro wechisarudzo chinokosha chinopindirana nevakawanda.
Izvo zvaive zvakanyanya kuitika uye zvimwe zviitiko zvisingatauriki kwenguva.
Ikubatana kwaSt. Andrews, Scotland ndiyo yakwegura munyika. Hainzi "Imba yeGorofu" pasina. Vakanga vari kutamba gorofu kuSt. Andrews kusvika kumashure kusvika kuma1400s. Asi hapana munhu akavaka gorofu-yakangowanzoitika mumhepo yegungwa linksland. Nharaunda dzakatamba kubva dune kusvika kune dune, uye avo vakava kuisa magidhi; Nzira dzakasvibira pakati pematombo dzakanga dziripo zvakasikwa dzakava fairways. Izvozvo ndizvo zvinoita kuti golisi iwedzere.
Saka nhamba yemakomba paSt. Andrews yakachinja kuburikidza nemazana emakore. Pakazosvika pakati pemakore ekuma1700, hutano hweSt. Andrews hwakanga huine mapofu makumi maviri nemaviri. Zvadaro, kunenge muna 1764, zvikamu zvina zviduku zvakatanga maitiro zvakabatanidzwa kuva maviri mabheti akawanda. Uye zvikamu zvina zviduku zvakapedzisa kosi yacho zvakabatanidzwa kuva maviri mabheti akawanda. Mukuita kudaro, zvinyorwa zveSt. Andrews (izvo zvatinoshevedza kuti Old Old) zvakabva pamapako makumi maviri nemasere kusvika pamakomba makumi mapfumbamwe.
R & A Codified 18 Holosi Yakazara
Makumi gumi nemasere haana kuve mureza wegorofu kusvikira kuma1900, asi kubva muna 1764 zvichienda mberi, mamwe mapeji akatevedzera mufananidzo weSt. Andrews 18-hole. Ipapo, muna 1858, Royal & Ancient Golf Club yeSt. Andrews yakabudisa mitemo mitsva.
"Muna 1858, R & A yakabudisa mitemo mitsva kune nhengo dzayo," akatsanangura Sam Groves, muchengeti weBritish Golf Museum.
"Mutemo wekutanga unoti 'imwechete yeZvibatanidza kana 18 masango inonzi inofanirwa kunze kwekunge zvakataurwa.' Tinogona kungofungidzira kuti, sezvo makirabhu akawanda akatarisa kuR & A yekupa mazano, izvi zvishoma nezvishoma zvakagamuchirwa muBrithani. , dzimwe dzidzo dzaiva nemakomba makumi mana uye gurusa regorofu raive richigamuchirwa seine mapako 18. "
Uye ndiyo mashumo gumi nematanhatu akave akaenzana mugorofu.
Nzira Dzakawanda Vasati - uye Kubvira - Vakashandisa Dzimwe Nhamba dzeHore
Pakazosvika pakati pemakore ekuma1760 - uye kusvika kusvika kuma1900s - zvakanga zvisina kujairika kuwana gorofu dzaive nemapako 12, kana 19, kana 23, kana 15, kana imwe imwe nhamba. Zvadaro maSt. Andrews- uye R & A-akatungamirirwa mahedheni gumi nematanhatu akabatwa.
Yagara ichive yakakurumbira, zvisinei, kuwana gorofu 9-hole gorofu. Iwe unogona kufunga nezvegorofu ye 18-hole muzinga wekunge uine mairi maviri-hole. Isu tinodanidza izvi mberi kwepfumbamwe uye kumashure mapfumbamwe .
Kana kechikwata chisina nzvimbo yakawanda, inogona kuvaka imwe chete yema 9-hole, iyo inoita gorofu 9-hole gorofu. Nini-holers inowanzonzi mumataundi maduku, kana sehurefu hwemashure makuru kana zvidzidzo zvepar-3 .
Mazuva ano, pane kuedza kwakawanda kuri kuitika muhukuru uye maitiro etigorofu, inotungamirirwa nechishuvo chekupa shomanana, sarudzo dzinokurumidza zvegorofu.
Zvidzidzo gumi nembiri zvehomu uye kunyange mapoka matanhatu-hole anobuda iye zvino.
Asi masango gumi nemasere anoramba ari mureza wegorofu, uye anoonekwa semutemo wepamusoro.
Dzokera kuGolf History FAQ kana Golf Course FAQ
Idzo gumi dzakanakisisa zvibvumirano mu baseball: 2016
Top 10 Australian Golfers Yese-Time
Vakuru Vakanaka Kwazvo MuLigi Yemauto Baseball History
Mhemberero dze 'Birdie' uye 'Egondo': Zvavakazova Gwara Magwaro
Nhoroondo yeChase Capades
Mutambo weEurope Tour wegore negore weMerit Leaders
Pamusoro Catchers mu Major League Baseball History
Top 10 Golfers Munhoroondo yeChampions Tour
Lycurgus Mutemo weSparta
Mutemo Wekupedzisira Wekushanda weVadzidzisi Muenzaniso
The Chinese Zodiac mum Mandarin
Nzira Iyo Inowedzera: Chii Chaicho uye Iyo Inoshandiswa Sei
Kugadziriswa kweVhebhu dzeChiShona muNjairo yeSunjunctive
Masoja ehondo: Brigadier General Billy Mitchell
Hondo Yenyika II: USS Wasp (CV-18)
Nzira Yakarurama Yokupinda muKayak
John John's University Admissions
Transformers Energon Collection Rimwe (DVD) Ongororo
Nzira Yokutaura Nhoroondo Dzinzadzi
Chikonzero Nei Uchifanira Kushamba Maoko Ako (Uye Kuti Ungaita Sei Zvakarurama)
Zvose Zvaunoda Kuti Uzive Nezvemarara
Nzira Yokugadzirisa Mutsara "Helfen" (Kubatsira)
Geology, Earth Science uye Geoscience: Chii chakasiyana?
'Ishe weFlies' Kudzokorora
Inonyanya Kuregererwa Miti: Nzvimbo Dzaipisisa dzeVashandi
Verb verb Conjugations: Insegnare
Aries uye Virgo Rudo rwakafanana
Nzira Yokugadzirisa Chiito cheGermany "Haben"
The Buildup yeStardized Testing Pressure
Kuratidza Qibra: Kutarisana neMakkah (Mecca) yeMuslim
Izvozvo 10 Zvinonyanya Kukosha Dinosaur Facts
Nei VaMaya Vaiita Vanhu Zvibayiro?